Yintoni eyinyani yokuhlaselwa ngokufa ngenxa yokuhamba ngeenyawo kwa-Assen? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	26 Agasti 2019	• 5 Comments
Ibilibali eliphawuleka kakhulu kwimithombo yeendaba ngo-Mgqibelo odlulileyo. Kwaye ngakumbi nam lo dliwano ndlebe kunye nosodolophu uMarco Out kwiwebhusayithi ye-NOS ejonge ngasemva, imvakalelo yesisu esomeleleyo yokuthatha inxaxheba iza ebusweni kwakhona. Umntu ohamba ngeenyawo uyabethwa ngamadoda e-5; ngubani lowo ambethe afe. Intombazana eneminyaka emine kufanelekile ukuba ibe kukuziphatha okubi kwindawo yokudlala, ke udlala bonke abahlobo bakho ukuba babethe loo mlo. Ngaba ayivakali iyathembeka? Hayi, ayivakali njalo.
Ndiyacinga ukuba into enje yenzekile, uya kuyibetha ngoko nangoko. Akunyanzelekanga ukuba udlale abahlobo abane ngenxa yoko. Ngaphandle kokuba i-pedophile yayiyimpimpi ye-MMA yasimahla, kodwa oku kubonakala kum ngathi kungaphandle komgca nokulindelweyo.
"Kwenzekile ngoku, bendingajongana njani nayo, ndibone ntoni nyani?”USodolophu uMarco Out uhle kancinci kancinci kudliwanondlebe lweNOS. Ummeli obalisa ibali lakhe kwividiyo yokuqala (jonga Inqaku le-NOS) Ubuye egudileyo kakhulu kwintetho yakhe kwaye okwangoku sibona indlela intente ephakanyiswe ngayo ngasemva, ukuze eneneni kungabonakali nto kubahlali bendawo. Ngamafutshane: kukho ithuba elihle lokuba siza kuphinda sisebenzisane nokuvelisa iindaba ezingeyonyani zosasazo oluqhelekileyo. Ibali leenkawu kwimeko yokuphakama 'Ingxaki, Ukuphendula, IsisombululoMsgstr ". Kwenzeka njani emva koko? Ewe, uyila ingxaki (eyenzelwe wena). Imema impendulo (kusetyenziswa amajelo eendaba kunye namajelo osasazo) phakathi kwabantu kwaye iqinisekisa ukuba wonke umntu unomsindo ngokwaneleyo ukuba anike isisombululo. Leyo isoloko iluqilima.
Sele uqikelele ukuba umthetho omtsha onqabileyo uya kuba yintoni emva kwebali elivela kwa-Assen: ukhuseleko olungakumbi kwi-pedophiles, ukuze singabotshani kunye. Ngayiphi na imeko, i-pedophile iya kufumana imeko yexhoba ngale ndlela kunye nayo yonke into enika imeko yexhoba, ufuna ukumnikeza ngasese isigxina isikhundla. Ndilinde nje. Ndiqikelela ukuba iyeza kamsinya.
Uxolo, kodwa ayinamsebenzi kum ukuba abahlobo bakho banokubetha ibhedi. Unokwenza kuphela oko ngokuthi ube ngowokuqala ukuzibonisa ngokwakho. Abahlobo abayi kukunceda ubetha umntu de afe, kuba abahlobo bakho baya kukubonisa inani leminyaka kuya kufuneka uhambe ngemivalo. Ngapha koko, abo bahlobo ngoku kufuneka bahambe emva kwebhari kwaye ngokungafihlisi, andikholelwa ukuba umoya onjalo wokubingelela ugxile kakhulu ekuqiqweni komntu ophakathi kweDatshi. Wonke umntu ucinga ngendlu yakhe, umthi, irhamncwa, ngoko ke awuyi kumnceda umhlobo abetha umntu afe. Siphinda sinikela ubungqina imveliso yeendaba ezingeyonyani, kunye nabadlali obonayo kwiifilimu njengabalinganiswa abaphambili. Ihlazo kuwe!
Ngubani okhumbula ukubulawa kukayise uYeren Denis onyana bakhe uRuben noYulian? Iingxelo zentshaba
tags: 4, I-Assen, dolophu, ukufa, eziziimbalasane, wabethwa, Marco, ntombazana, iindaba ezibuxoki, phandle, ohamba phambili, bulawa, kudala, Ndineminyaka emine
26 Agasti 2019 kwi-09: 10
Yenza / uyila kwaye u-hype abe yindima yexhoba, setha ithoni kwaye abantu abangaboni sizathu
ukukholelwa ukuba abazukuza nento enje.
Kuhlazo ukuba bathathe ividiyo kaJoris Truthseeker malunga nomsiki wekhonkrithi ukusuka kumnatha,
Inyaniso ayinakufika engqondweni yakho.
26 Agasti 2019 kwi-13: 02
gijs wabhala wathi:
26 Agasti 2019 kwi-21: 43
yintoni umahluko owenzekileyo apha okanye owenzekileyo kwisigcina-ntloko esithe wahlasela umntu ohlukumeza intombi yakhe ngefosholo kwaye waya ejele ixesha elide.
Wayewalumkisile amapolisa, kodwa afika, ke yena wangenelela.
Kodwa ewe unomahluko kubulungisa.
26 Agasti 2019 kwi-22: 29
Ewe, banako 'ngaphezulu komthetho' ubulungisa, ubulungisa besiqhuphe kunye nobulungisa besepha ukuze bakwazi ukuqinisa imithetho yeqela
27 Agasti 2019 kwi-13: 04
Phila uthuthu lwakho, akuvanga ngabantu ngothuli lwabo. Ndin-apie kwaye ke ndiye ndafumanisa ukuba ..
Ibali kukuba yayiyinto yokuqala i-pedo, kulungile ke ndicinga ukuba ilungile. Ngoku kuphinda kusithiwa ayisosithulu kwaye iyisimungulu .. ukuba umntu usweleke nyani andazi ngokuqinisekileyo, kodwa ngendoda ye5 ekwi1 umntu aze axelelwe ukuba bazakukhutshwa ngeCawa kuba kwakungekho bungqina bayo ukuhlukunyezwa (ukubethwa de kwabe sekufile ke akukho bungqina? Hmm) ...
Ukuqiqa kunye nokucaca akuyona into yamapolisa kunye neendaba, kodwa sele siyayazi loo nto ..
Njengezinye izinto, le yinto wonke umntu aya kuyilibala ngenyanga okanye i-2 kwaye ke imithetho nemithetho emitsha sele ityhilekile .. shit eqhelekileyo kodwa akukho mntu ukhathaleleyo!
I-Kheb le evela kwi-rtvdrenthe kunye ne-axes yeendaba. com
Enkosi kwakhona ngokuzibophelela kwakho kwakhona martin
« IAmazon iyatsha, imiphunga yomhlaba isemlilweni!
U-Yolanthe Cabau kunye ne-polisi yamanqanaba e-DNA, imveliso entle kaJohn de Mol (njengeendaba ze-ANP) »
Utyelelo lulonke: 4.137.792